Maxaa khatar ah oo ka dhalan kara marka cuntada la boobsiiyo? | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Maxaa khatar ah oo ka dhalan kara marka cuntada la boobsiiyo?
Maxaa khatar ah oo ka dhalan kara marka cuntada la boobsiiyo?
Posted by: Mahad Mohamed May 12, 2020
Himilo – Baaritaanno caafimaad ayaa muujiyay khatarta laga dhaxli karo cuntada sida boobsiiska ama sida dhaqsida ah loo cunno iyadoo khubarada iyo dhaqaatiirta xaqiijiyeen sida ay muhiim u tahay in si hagaagsan loo qaato cuntada.
Previous: Khubaro: Soonka ayaa kahortag u ah wadno xannuunka
Next: Chelsea oo xiiseynaysa weeraryahanka RB Leipzig Timo Werner